IINGCAMANGO EZINGAMA-60 EZITHUTHUKILEYO ZOKUTHOBA - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iingcamango ezingama-60 eziThuthukileyo zokuThoba
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwizinyuko zokuhlambalaza imibono yoyilo lwangaphakathi. Apha ngezantsi sabelana ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba ngomgaqo kubandakanya okwangoku, eyendabuko, eyorhwebo kunye neyangoku. Kumakhaya anenqanaba elingaphezulu kwelinye, izinyuko kubalulekile ukwenza ukuba indlu ifikeleleke. Kungenxa yokuba bekhonza umsebenzi othile, nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba abayonxalenye ebalulekileyo yoyilo ekhaya.
Ukuhamba ngomzila ngokukodwa kuza nezinto ezininzi onokukhetha kuzo kwizinto oyilo onokuzisebenzisa ukuseta ithowuni yendlu yakho. Apha ngezantsi, siza kwabelana ngesitepsi kuyilo lwangaphakathi isikhokelo sokukunceda uqonde kwaye ukhethe kwezona zikhetho zibalaseleyo.
Uyilo loThutho lwezitepsi
Iindidi zoThutho oluhamba ngaphakathi
Ukuhamba ngezinyuko kwensimbi
Glass Ukuhamba ngezinyuko
Ukunyuka kwezinyuko Ukuphakama
Ixabisa malini ukuTshintsha iZinyuko?
Iikiti zoKwenyuka ii-Stair
Zingaphi iZitepsi ngaphambi kokuba i-Handrail ifuneke?
Ukupeyinta iitreyini zoLoliwe
Igalari yoThutho lwangaphakathi
Ukuhamba ngeentsimbi okwangoku
Iglasi yale mihla enamanyathelo okudada
I-Wood Handrail ene-White Balusters
Intsimbi yokuhombisa eyenziwe
Umsebenzi we-Iron kunye ne-Wood Railing
Intsimbi ngenkxaso yeenkuni
Izinyuko ezibini ngeNsimbi yokuhombisa eyenziwe
Iglasi eQinisekisiweyo yale mihla kunye noYilo loMthi
Nkqo Metal Inkxaso
Izitebhisi zesiko kunye ne-White Balusters
Isinyuko esenziwe nge-Iron Spiral
Izinyuko zeStainless zentsimbi
Izitepsi ezijikelezayo kwiThala leencwadi
Uyilo lwangoku lweMetro lwensimbi
I-Metal Balusters kunye neeNyathelo zeenkuni
Ukuhamba ngenqila kwePhondo laseFrance ngeTravertine Staircase Steps
Umdibaniso weCandelo leZinyuko
Umgaqo kaloliwe ophezulu
I-Disney yeMicrosoft Mickey kunye neMinnie Mouse Stair Railing
Ukungena kwizinyuko zeCabin
I-Rustic Wood Staircase Ukunyusa
Ukuhamba ngenyawo okuhle kufuneka kuncome umxholo opheleleyo wekhaya lakho kwaye wenze umbono wokuqala kwiindwendwe xa zingena. Eyona imixholo yoyilo ixhaphakileyo yeyangoku, eyeli xesha kunye neyesiko / eyorhwebo.
Ukuhamba ngenqwanqwa kwale mihla kulandela amathemba afanayo ezinye iziqwenga zoyilo lwangoku. Ijolise kuyilo olucekeceke, oluncinci. Ezi ntlobo zikaloliwe zihlala zingahombisi kakhulu kwaye azithathi naliphi na igumbi ngaphandle kokuba ziyimfuneko.
Ngelixa uyilo lwangoku luvakala ngokufana noyilo lwangoku ngokwenkcazo yamagama abo, kukho umahluko ophambili. Uyilo lwala maxesha lujolise kakhulu kwiikona ezibukhali, ezichaziweyo ngelixa uyilo lwangoku lusebenzisa ukuthamba, imiphetho ejikelezileyo.
gcina izimvo zamakhadi omhla
Ngamanye amagama, ukunyuka kwezinyuko okujikeleza eludongeni endaweni yokuphela kwinqanaba le-90-degree kuya kuba kuyilo lwangoku.
Uyilo lweRustic lujolise ngakumbi ekusebenziseni ubuhle bendalo behlabathi elikungqongileyo endaweni yokuxhomekeka kuyilo olwenziweyo. Ke, ukuba ufuna i-rustic style ekhaya, ubunokuxhomekeka kumthi oqinileyo endaweni yesinyithi okanye iglasi.
Xa ufaka ukugcwala kwigumbi elingaphantsi, kuya kufuneka ujonge umsebenzi wegumbi lakho elingaphantsi. Ukuba igumbi lakho elingaphantsi liphinde lavuselelwa ukuze lihlale rhoqo, kuya kufuneka ujonge ekuthukeni ngokungathi ungasebenzisa kwenye indawo ekhayeni lakho. Ukuba yeyokugcina nje, kulula ukusebenzisa isitayile esinexabiso eliphantsi ukhuseleko kwaye esingakhangeliyo.
Abantu abaninzi bakhetha i-railing eyenziwe kwangaphambili ngumenzi, ayisiyiyo kuphela into onokukhetha kuyo. Unokusebenza kunye nekhontraktha ukwenza isithuko esifanelekileyo esizalisa ikhaya lakho ngokuthe ngqo. Ngokwenza njalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uya kwamkela iindleko ezingaphezulu. Ndwendwela eli phepha ukuze ubone igalari yethu ye iintlobo ezahlukeneyo zezinyuko ekhaya.
Enye yezona nkcukacha zibaluleke kakhulu kwizitepsi ezintle ngumgaqo wesandla owenziwe kakuhle. Ayisiyokubamba kuphela into ebalulekileyo kukhuseleko, inokuba yindawo ekugxilwe kuyo yefoyer yasekhaya kwaye inegalelo kumxholo uyilo ngokubanzi. Ezona ntlobo zithandwayo zokubanjwa kwezandla ezisetyenziswayo ngoku ziinkuni, iintsimbi ezenziweyo, iglasi kunye nesinyithi.
Xa bebhekisa kwiindidi zezitepsi, abantu abaninzi babhekisa kwisitayile sothutho. Amaxesha amaninzi, ukhetho lwesitayile luchatshazelwa ziindidi zezitepsi onazo- ezinje ngesiko okanye ukujikeleza - kunye nezinto ezisetyenzisiweyo kuthutho.
Umthi lukhetho oluqhelekileyo lokuthuka kodwa intengiso iye yanda kule minyaka idlulileyo ukuba ibandakanye izixhobo zangoku ezifana neglasi kunye nentsimbi ezahlukeneyo. Apha ngezantsi siza kujonga ngakumbi kwezi zixhobo.
Ukunyuka kwezitepsi zensimbi kuye kwaba lukhetho oluthandwayo kodwa isinyithi ngaphakathi kwaye ngokwaso asicacanga kuba zininzi iintlobo zesinyithi ezinokusetyenziswa.
Inketho yokuqala onayo kukuthuka intsimbi. Olu lukhetho oludumileyo njengoko intsimbi esetyenzisiweyo ihlala isetyenziselwa uyilo oluhonjisiweyo. Unokuxhomekeka kwinyithi eyenziweyo ukuze uhlale ugcinwe kakuhle kuyo yonke le minyaka, kuba intsimbi eyenziweyo ihlala igutyungelwe ukugcina ubumdaka kunye nokufuma.
Inketho elandelayo yintsimbi engenasici. Oku kuyathandwa kuba yenye yeendlela ezingabizi kakhulu kwizinyuko zesinyithi. Ngaphandle kwexabiso eliphantsi, i-stainless steel isomelele kwaye inesitayile.
Ukuhamba ngenqwanqwa kwentambo yenye yezorhwebo exhomekeke kukhetho enkosi ngenxa yokuqina kwayo. Olu hlobo lwentambo lubonakaliswa ziintambo zalo ezithe tyaba endaweni yezithuba ezithe nkqo njengezitepsi zesiko.
Kwiintlobo ezintathu eziphambili zentsimbi ebiza kakhulu kunensimbi engenasici okanye i-cable stair railing.
Izinyuko zeenkuni zezinye zezona ntlobo zithandwa kakhulu. Zihlala zinxulunyaniswa ne-regal, ukujongwa kwendabuko njengakumathala eencwadi amaninzi nakumakhaya embali. Ngenxa yoku, izitepsi zokhuni zihlala zisetyenziswa kwizakhiwo zikarhulumente nakumakhaya afuna uyilo oluphezulu.
Kubalulekile ukuba uqaphele, nangona kunjalo, ukuba ukrozo lomthi akufuneki lube luhombise kwisitayile sabo. Ukuba ungathanda ukoyikiswa ngomthi ngokulula, zinokwenziwa ngaphandle kweenkcukacha ezigqithileyo okanye uyilo olungeyomfuneko. Izinto ezenziwa ngazo zihlala zibeka ithoni yolawulo, hayi uyilo olunzima.
Ukuya kuthi ga ngoku izinto ezisetyenzisiweyo kwizinyuko zeenkuni, i-oki kunye nemisedare ziyaziwa kakhulu. Emva kwalonto, iteak kunye mahogany zizinto ezithandwayo endaweni yazo.
Ukupeyinta isinyibilikisi somthi yindlela efanelekileyo yokuqaqambisa isithuba okanye ukutshatisa itrayi, ukubekwa kwewayini kunye nokubumba kwindawo yoyilo oludibeneyo.
Ingcamango entsha yokunyuka kwezitepsi i-glass railing. Olu hlobo lwesinyeliso luhluke kancinci kunezinye iintlobo. Endaweni yokwenziwa ngezithuba zeglasi ezimile njengokuba unokubona ngomthi okanye ngesinyithi, iziporo zeglasi zihlala zenziwa ngeglasi.
Olu lukhetho olunomdla kuba zihlala zisetyenziselwa ukubonakalisa ukuba akukho thuko ngelixa zisabonelela ngezixhobo ezifanayo zokhuseleko zezinye izinto. Owona mqobo uphambili kolu hlobo lokuthuka, nangona kunjalo, lixabiso.
Leli khitshi lotshintsho lwangoku kunye negumbi lokutyela linezitepsi zebalter ezihamba ngesithambiso esineqhwa kunye ne-chrome ngesandla.
Inketho eyahlukileyo yokuhamba ngezinyuko ngamanye amaxesha inokuxhomekeka kwizinyuko ngokwazo. Izitepsi ezijikelezayo, umzekelo, ziyilo loyilo olukhethekileyo oluhlala lusetyenziselwa amagumbi amancinci angenako ukuhlala kwizinyuko ezinkulu. Kuhle kakhulu ukuba uyilo olunokusetyenziswa kwizinyuko ezisemgangathweni lunokusetyenziswa kwizinyuko ezijikelezayo nangona umsebenzi wofakelo unokuyalela iindleko eziphezulu.
Izitepsi ezijikelezayo zihlala zibonisa izinto ezimbini ezinomdla ezibizwa ngokuba yimitya yokusika kunye neefestile. Sika imitya zizithuthi ezivulekileyo ezisemacaleni lelona lungu libalulekileyo liqhuba lidayagonali ukuxhasa izinyuko ezijikelezayo. Iifestile ngamanqanaba amancinci kwelinye icala kunakwelinye eliqhelekileyo lisetyenziswa kuyilo lokujikeleza. Iseti yeewindow zenza amanyathelo ajikelezayo kwizinyuko ezijikelezayo.
Ixabiso lezinyuko ezijikelezayo lixhomekeke kubungakanani bayo, izinto ezisetyenzisiweyo kunye nomgangatho. Nangona kunjalo, njengokwenza ngokubanzi ungafumana izinyuko ezijikelezayo ezisezantsi njenge- $ 600 ukuya kuthi ga kwi-20,000 yeedola.
Xa kuziwa ekulinganiseni i-stair railing, kuya kufuneka ujonge iikhowudi zokwakha iitepsi. Ngelixa uninzi lweeprojekthi zakho zasekhaya ezinjengemisebenzi elula yepeyinti okanye ukutshintsha i-flooring ayichaphazeli iikhowudi zokwakha, imisebenzi efana nokufaka i-stair railing okanye i-plumbing do. Ke, nantsi isikhokelo esikhawulezayo sokukunceda uqalise.
Into yokuqala ekufuneka ichaziwe apha, nangona kunjalo, kukuhamba ngezinyuko ngokuchasene nabalindi bezitepsi. Ukuhamba ngezitepsi ezilula kunento yokwenza nokugcwala okusebenzayo kutyekelo onokuthi ubambelele kulo ukunceda unyuke usihla kwizitepsi ngokukhuselekileyo. Kwelinye icala, oonogada okanye izinyibilikisi zomkhosi, zihlala zifakwa kumgangatho oflethiweyo njengokufika emhlabeni.
Ukufikelela kubude, i-handrail kufuneka ibe zi-intshi ezingama-34 ukuya kuma-38 ukuphakama. Lo mlinganiselo uvela kwizinyuko ezikhulisayo ukuya kuthusho. I-stair nosing yinto echazwe njengangaphambili kwinqanaba lesiteji okanye ukunyathela kumda wesinyathelo.
Ukugcwala akufuneki kuphume eludongeni ngaphezulu kwe-4 ½ intshi. Oku kubalulekile kuba awufuni ukuba i-railing yakho ithathe indawo kwindlela yokuhamba ngezinyuko zakho. Oku kunokuba yingozi yokhuseleko, ngakumbi kwimeko apho umntu ephethe izinto kunye nabo besihla kwizinyuko.
Nangona kunjalo, ukunyuka kwezinyuko akufuneki kungabikho ngaphantsi kwe-1 ½ intshi ukusuka eludongeni nokuba. Eli nani livela kwinto yokuba kufuneka uqiniseke ukuba umntu osebenzisa izinyuko unokuphakamisa isandla sakhe ngokunyelisa yonke indlela. Kwakhona, oku kukuqinisekisa ukhuseleko kwizitepsi. Ngelixa ingeyonxalenye yekhowudi yokwakha, uninzi lwabanini makhaya lukhetha ukubeka izibiyeli zokubambelela kwindawo ezinokuthi zifike kwindlela yokuhamba kwezandla kuthutho.
Ukuba uneesitayile macala ezinyuko zakho, kuya kufuneka uqiniseke ukuba azikho kufutshane kunee-intshi ezingama-27. Oku, kufana kakhulu neemeko zokuhamba ngomgama ukusuka eludongeni, kukuqinisekisa ukuba izinyuko azibi mxinwa kakhulu kukhuseleko. Owona mgama ubuncinci bokuthuka ukuba une-railing enye kunye nodonga olwahlukileyo luhleli kwii-31½ intshi.
Okokugqibela, ukuphakama komjelo wokukhusela ubuncinci bunama-intshi angama-36. Lo mlinganiso kukuqinisekisa ukuba abantu xa befika kwizinyuko abuwa kwaye bazenzakalise. Ukuba ukufika kwizinyuko zakho kungaphezulu kweesentimitha ezingama-30 emhlabeni, kufuneka kufakwe i-guardrail.
Xa uthatha isigqibo sokuba ufuna ukutshintsha isinyuko sakho, kuyakufuneka wazi ukuba loluphi utyalo mali. Ngokwesiqhelo, indleko zokufakwa zihlawulwa ngeyure kwaye ufakelo luthatha malunga nosuku lomsebenzi. Ixabiso eliphakathi labasebenzi liphakathi kwe- $ 60 ukuya kwi- $ 100 ngeyure. Ixabiso labasebenzi lingahluka ngokuxhomekeke kwinqanaba lenkampani osebenza nayo kunye nokuba kunzima kangakanani ukufakelwa. Njengoko kulindelwe, ufakelo olunzima ngakumbi ngesandla luya kubiza ngaphezulu.
Zonke ezinye iindleko zokutshintsha i-stair railing zixhomekeke kwinto oyisebenzisayo kunye nokuba ingakanani na oyifunayo xa ujinga. Ukunyuka kwezinyuko zeenkuni kukwinqanaba elisezantsi leendleko ngeendleko zeemitha ezingama-50 zezinto eziphantsi njenge- $ 750. Ukugcwala ngeglasi kunokuba lolona khetho lubiza kakhulu kwizinyuko ezinesilinganiselo esilinganayo sezinto ezixabisa ukuya kuthi ga kwi-40,000 yeedola kuyilo lwesiko.
Ukuba unomdla kwi-DIY stair railing, unokufuna ukuqwalasela ikiti yokuhamba ngenyawo. Oku kulunge ngakumbi kubanini bamakhaya abanomdla wokufaka ezabo izitepsi kodwa abanamdla okanye abazi ukuba bangazakha njani ezakho kwasekuqaleni. Ikhithi nganye iza nayo yonke into oyifunayo ukuyifaka kunye nemiyalelo.
I-Aluminium handrail kit - Jonga kwi IAmazon
Siza kujonga eminye imiyalelo elula yokufaka izinyuko ezingezantsi.
Xa ufuna ukufaka i-stair railing, into yokuqala oya kuyidinga kukulinganisa iteyiphu. Ewe kunjalo, kuba ufuna ukuba izinyuko zihambe ngobude bezinyuko. Eyona ndlela yokwenza oku kukutsala iteksi emazantsi ezinyuko kwaye ulinganise umgama olandela amanyathelo. Kuba ukuthuka akuhlali kumile kwaye kuqala ngokuthe ngqo esiphelweni sezinyuko. Kukulungele ukongeza ii-intshi ezi-6 kwimilinganiselo yakho ukuze ube ne-3-intshi ye-intshi kwisiphelo sezinyuko zakho.
Uyakufuna kwakhona umntu ozifumanayo. Kungenxa yokuba ukubamba ukungcikiva kwakho, kuyakufuneka ufake izibiyeli zokubambisa. Ezi zibiyeli zokubamba kufuneka, ubukhulu becala, zii-intshi ezingama-48 ukwahlukana kodwa unokufumana isindululo esithile kwizixhobo ozisebenzisayo. Qiniseka ukuba umakisha apho uzifumana khona ezi studs.
Emva koko, uya kufuna ukufumana ubude beebakaki. Ukwenza oku, uya kufuna ukuthembela ekungqineni ujonge ezantsi kwizitepsi. Ngale ndlela, unokwenza umgca ungqinelane kunye namanqaku e-stud. Emva koko, ungasebenzisa isikwere somchweli ukuqinisekisa ukuba ulungelelanisa imingxunya yokujija ezantsi kwetreyini ngokuchanekileyo. Qiniseka ukuba ulinganisa ubude bebrakethi kwaye uphawule ukuba uninzi lwee-intshi ezantsi kwe-handrail ukuphakama ukuze nje ukuba uyijije, uya kuba nokuphakama okunqwenelayo. Ukuba usebenzisa izibiyeli ezinemingxunya enye, uya kuba nexesha elilula lokuzifaka.
Xa ulungele ukubeka iileyili eludongeni, kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba yonke into ihambelana ngokuchanekileyo. Indlela elungileyo yokwenza oku kukuthatha indawo nganye oyiphawule kwangoko kwaye uyiqaqambise ngokusebenzisa itheyiphu eninzi. Oku kukunika isalathiso esicacileyo sokuqinisekisa ukuba imilinganiselo yakho iyahambelana ngendlela oyifunayo.
Ukusuka apha, ungaqala ngokulula ukuqhuba i-railing eludongeni. Ewe kunjalo, esi sisikhokelo esisisiseko kuphela. Ukuba ujonge ukufaka isinyeliso esenziwe ngokwezifiso, umzekelo, inkqubo inokwahluka. Ukubheja kwakho okusemgangathweni kukujonga kabini nangayiphi na inqaku lomenzi elinokuza nezinyuko zakho ngaphambi kokuba uqalise.
Ukubamba ngesandla kuyafuneka xa usebenza ngezinyuko ezinezinyusi ezine okanye nangaphezulu. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba oku kuthi kunyuka ezine hayi amanyathelo amane. Oku kubalulekile kuba kuthetha ukuba kufuneka ubale inqanaba lomgangatho olandelayo njengenyathelo.
Njengomgaqo oqhelekileyo wobhontsi wesandla kufuneka ube phakathi kwama-intshi angama-34 nama-38. Ukufumana lo mlinganiselo ungalinganisa ukusuka kumda wesiteji ngqo ukuya kuloliwe. Ukulinganisa ngakumbi ukuya kwinqanaba kunokubonelela ngesiphumo esingalunganga.
Izinyuko zikaloliwe mazingabikho ngaphezulu kwe-4 ½ intshi ukusuka eludongeni oluphakanyiswe kuyo. Ubuncinci bomgama kaloliwe ekufuneka ubenawo ukuze kucace phakathi komgaqo kaloliwe nodonga zii-intshi ezi-1 room ukubonelela ngendawo eyoneleyo yokubamba ukungcola.
Ngapha koko, umgama omncinci phakathi komgaqo kaloliwe kufuneka ungabikho ngaphantsi kweesentimitha ezingama-27. Oku kubonelela ngendawo eyoneleyo yokuba umntu akhwele kwizinyuko ngelixa ephethe izinto ngaphandle kwesithintelo. Ukuba izinyuko zakho zinesitimela esingaphandle kuphela kunye nodonga kwelinye icala umgama omncinci kufuneka ungabi ngaphantsi kwe-31 ½ intshi.
Ukuhlala ngaphandle, iibhalkhoni, iivaranda okanye iidesika kuyadingeka ukuba ubuncinci ukuphakama kweesentimitha ezingama-36 kwimigca yokubamba xa ukwehla kungaphezulu kweesentimitha ezingama-30 ukuphakama. Kwidesika yangaphandle okanye ekubambeni okungaphantsi kokuphakama okungama-30 kuye kubakhi ngokwengqiqo yokuba ingaba bangazakha na iziporo. Nangona kunjalo, kuyacetyiswa ukuba ii-guardrails zongezwe ukuthintela ukwenzakala okunokubakho.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile xa upeyinta ukuthuka kukuyibeka kuqala kwaye uyiyeke yome. Emva koko, kuya kufuneka uyisongele phantsi ingqangi phantsi ukuze uqiniseke ngombala ogudileyo wepeyinti. Qinisekisa ukuba uhlambulule uthuli kwisanti ngaphambi kokuba upende.
Bukela le vidiyo ngendlela yokupeyinta izinyuko.
Nje ukuba uqale ukupeyinta, kuya kufuneka ucokise njengokupeyinta nayiphi na enye into kwaye ulumke-usebenzisa amalaphu okwehla kunye nezinto ezinje ukunqanda ubumdaka.
Apha ngezantsi sabelana ngegalari yethu yezinyuko zangaphakathi ezibandakanya zonke iintlobo zezinto kunye nezitayile.
Le foyer yanamhlanje ine-staircase enesinyithi esimnyama kunye nenkxaso yesilivere yekhebula. Izitepsi ngokwazo zisebenzisa umgangatho omnye okhuni kwaye zihamba nazo phezulu. Enye into enomdla yiglasi enqabileyo kwaye umnyango wangaphambili womthi kunye slats oxwesileyo.
Le ndlu yanamhlanje ibonisa amanyathelo okudada kunye neeglasi zeglasi njengendawo ekugxilwe kuyo kwigumbi. Inkqubo ye- Igumbi lokuhlala elinemigangatho yeethayile ye-porcelain Konke ukubonelela ngobuninzi bokukhanya kwendalo kunye nomgangatho kwiifestile zesilingi.
Igumbi lokuhlala elisesikweni elinomgangatho okhuni libonisa izinyuko ezinesinyithi somthi kunye neebalusters ezimhlophe kunye nezinyathelo zekhaphethi.
ungacela njani umntu ukuba abe ngumakoti wakho
Oku kungena kwangoku kubonisa isinyuko esinyusiweyo esinyusiweyo ngamanyathelo amnyama egranite. Igumbi ngokwalo libonisa isuntswana lobukhazikhazi obunephepha lodonga elinombala wesilivere kunye nemigangatho emhlophe yeplasta enezibuko ezijingayo nefenitshala yesikhumba.
Nanku umgangatho wesibini kunye neenkcukacha ezisondeleyo kwisinyithi esenziwe ngesinyithi kunye ne-glass deco chandelier.
Olu tyando lwentsimbi yokuhombisa lunololiwe wesandla.
Igumbi lokulala elikwiMeditera linophahla lwentsimbi olwenziweyo kunye namanyathelo eenkuni akhokelela kwindawo yesibini yokuhlala.
Igumbi lokuhlala langoku libonisa intsimbi yentsimbi yanamhlanje kunye neenkxaso zenkxaso. Inqwelo yebharki ephathekayo ithatha indawo ngokuchasene nezinyuko eludongeni. Jonga eli phepha ngaphezulu phantsi kwezinyuko izimvo yokugcina nokuhombisa.
Le ndlela yokungena inkulu ibonisa isitepsi esihle esenziwe ngesinyithi esinezinto ezimbini ezingaphambili.
Ifoyer yasekhaya ebukekayo enezitepsi ezijijekileyo ezinezinyithi zomthi kunye nezikhonkwane ezikhokelela kumgangatho wesibini.
Le foyer ikhokelela kwizinyuko ezinophahla ezinezinyibilikisi zentsimbi kunye neentsimbi zokubamba ezenziwe ngomthi.
Isabelo # 8
Isabelo # 9
Isabelo # 10
Isabelo # 11
Izitimela ezingenasici ezingenanto zinomtsalane kukhetho lweendlela ezahlukeneyo zasekhaya. Ihlala isetyenziswa ngaphandle ngenxa yeempawu zayo zemozulu ezinganyangekiyo, i-stainless steel iqinile kwaye ijongeka ngathi inesitayile. Iindleko zezinyuko zesinyithi ezingenazintsimbi zijikeleze i- $ 110 ngeenyawo nganye yomgama ngaphandle kokufakwa.
Izitepsi zangoku ezakhiwe ngentsimbi engenazintsimbi zinamanyathelo ajongileyo omthi ajikelezayo. Amanyathelo abopha ngokugqibeleleyo kunye neempawu zomthi ezifumaneka kwiintsika zenkxaso, umgangatho waphantsi wefoyer kunye nekhitshi yesiqithi sekhitshi.
Isabelo # 13
Isabelo # 14
Le foyer intle inezitepsi zephondo zaseFrance ezinamanyathelo okuhamba.
Esi sinyuko sinesiporo somthi esingaphezulu esineentambo zomnqamlezo kunye nenkqubo yokugcoba ngentsimbi.
Ndiboniseni umama walokhwe
Isabelo # 15
Esi siko sakwaDisney siphefumlelwe ngezitepsi zikaMickey kunye neMinnie mouse. Ukugqibelela kwigumbi lomdlalo wabantwana okanye kwigumbi losapho, isinyuko esiqhelekileyo sinokuzisa ubuqaqawuli bakho kwaye kongeze umlinganiswa kwindawo.
(1) Indawo yaseTuscan ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(Mbini) Indawo yaseTuscan ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(3) Indlu ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(4) Indlu enkulu ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(5) Indlu ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(6) Amanzi angaphambili ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(7) Ihotele eNtofontofo yaseGrisi ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(8) UMonterey ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(9) Intlambo yeKarmele ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(10) Izitayile zoyilo ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(Shumi elinanye) Uneek ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(12) Indlela ebomvu ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(13) Indlela ebomvu ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(14) Hlaziya iDallas ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
(14) Uneek ukusuka Vimeo (Creative Commons License)
Ukufumana eminye imifanekiso yezitepsi zezitepsi, ndwendwela igalari yethu Uyilo lwefoyer ukufumana ezinye izimvo.
Amaxabiso ama-3 ikeyiki yomtshato
amakhonkco omtshato ekunene okanye ekhohlo
indlela yokugcina ilokhwe yomtshato
kuchaphulo olu malunga nothando nolwalamano